Arịọ akụkụ bụ a workpiece ma ọ bụ oghere nwetara site ibe ya bụrụ na deforming a metal blank.The n'ibu Njirimara nke metal billet nwere ike gbanwere site n'itinye mgbali iji mee ka ọ na-emepụta plastic deformation.
High Quality Axle Spindle tube
Spindle tube bụ akụkụ dị mkpa nke mgbakọ ụgbọala na-anya ụgbọ ala, ọ na-etolite akụkụ dị mkpa na ụlọ axle ụlọ, nke mere na a na-edozi ọnọdụ axial nke wiil aka ekpe na aka nri, na-akwado oke nke etiti ahụ na nzukọ ahụ ọnụ, na na-ebu ike mmeghachi omume n'okporo ụzọ na oge site na wiilị mgbe ụgbọ ala na-anya ụgbọ ala, ma na-agafe nkwụsịtụ na etiti ahụ.
High nkenke Nzipu Spline Spindle
Spline Spindle bụ a n'ibu nnyefe, udo isi, semicircular okirikiri, oblique isi ọrụ bụ otu ihe ahụ, bụ nyefe nke n'ibu torque, na ọdịdị nke aro nwere a longitudinal keyway, enịm ke aro nke adiana akụkụ nwekwara kwekọrọ ekwekọ keyway, nwere ike ịmegharị ntụgharị dị egwu na shaft.N'otu oge nke ntụgharị, ụfọdụ nwekwara ike ịbụ ihe eji eme ogologo oge na ọdụ ahụ, dịka gearbox shift gear, wdg.
High Quality Axle Spindle aku
Spindel aku bụ ụdị aku a na-ejikọkarị na gwongworo, ụgbọala na-adọkpụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ iji mkpọchi mkpọchi maka mkpọchi. Otú ọ dị, ntụkwasị obi nke ụdị mkpọchi a ga-ebelata n'okpuru nnukwu ọrụ. N'oge ụfọdụ dị mkpa, anyị ga-ewere ụfọdụ mgbochi mgbochi iji hụ na ntụkwasị obi nke mkpọchi akụ.
Hot Sale S Head breeki Camshaft maka Truck Parts Braking System
The S breeki camshaft tumadi mejupụtara CAM na mkpanaka osisi, a na-ejikọ CAM na mkpanaka osisi, nke ejiri CAM na ogwe osisi ahụ rụọ, akụkụ nke ogologo nke CAM na-echekwa ụdị S, na ụdị S abụọ dị elu abụọ. CAM dị na njedebe nke mkpanaka osisi ahụ. N'ihi ya, ọ nwere ezigbo nha nha nke usoro breeki na-agbazi ụgbọala, na ike ịnyefe ya dịkwuo n'otu na usoro nnyefe, na esemokwu ọnụọgụ dị obere, ka ibelata akwa na akwa na ojiji, ịgbatị ndụ ọrụ na belata mmezi cost.On n'aka nke ọzọ, S-ụdị camshaft nnyefe mmetụta dị mma, nwere ike n'ụzọ dị irè izute mkpa nke ibu nnyefe torque , mmetụta dị irè ka mma.
Akwa Ogo mmiri
Spring Ọ bụ akụkụ nke arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ. Akụkụ nke ejiri ihe na-agbanwe agbanwe na-agbanwe n'okpuru ọrụ nke ikike ndị dị na mpụga, wee laghachi n'ọnọdụ mbụ ha mgbe ha wepụsịrị ikike ndị dị na mpụga. A na-akpọkwa "mmiri."